Beesha Mudulood oo Beri Shir ka yeelaneya Cadaadis lagu Haayo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh - Awdinle Online
Home News Beesha Mudulood oo Beri Shir ka yeelaneya Cadaadis lagu Haayo Sheekh...
Beesha Mudulood oo Beri Shir ka yeelaneya Cadaadis lagu Haayo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh
November 12, 2019 (Awdinle Online) – Maanta waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay odayaasha beesha uu ka soo jeedo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kulankaas oo ka dhacay Hotel Lafweyn Degmadda Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
Odayaasha beesha Mudulood iyo guud ahaan siyaasiinta iyo waxgaradka ee beesha ayaa beri ku balamay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho waxaana loo yeeray Xildhibaanada ay Mudulood ku leeyihiin labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qaar ka mid ah odayaasha oo aan la xiriirney ayaa inoo sheegay in aysan aqbali karin sidii loola dhaqmay Madaxweyniyaashii hore ee Soomaaliya iyo hadalkii daba joogay ee Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ee digniinta ahaa, una ekaa mid handadaad ah.
Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in kulanka Mudulood markii uu dhamaado maalmo ka dib la qaban doono kulan ay u dhan yihiin beelaha Hiraab, islamarkaana looga hadli doono qatarta dalka uu ku jirto.
Fariin qoraal ah ayaa loo wada direy dhamaan Xildhibaanada labada gole ee Baarlamaaanka Soomaaliya ee Mudulood ka soo jeeda si ay beri kulankaasi uga soo qayb galaan, waxaana la filayaa in go’aan aad u culus uu ka soo baxo sida ay noo sheegeen odayaasha dhaqanka Mudulood qaarkood.
Previous articleKheyre oo ka qayb galay kulanka sanadlaha ah ee madasha nabadda Paris
Next articleGadoomiye mursal oo khudbad ka jeediyay Kulanka Guddiga Joogtada ah ee Baarlamanka Federalka Ethopia:- (Sawiro)